Ukubuyiselwa kweSemalt: Isixhobo soKhuseleko lweDatha yeWebhu enoMbane
I-Connotate iyisofthiwe yesicatshulwa emangalisayo eyenza abasebenzisi bayo bakhuphe isixa solwazi oluvela kumaphepha ewebhu. Ubonelela nge-automated ye-web scraping iqonga elinokukunceda ukufumana yonke idatha ayifunayo kwangoko. Idibanisa ngendlela ekhethekileyo ngokukhawuleza kunye nomxholo ophezulu kunye nomxholo ochaphazelekayo. Abaphathi kunye nabaphandi bewebhu abasebenzisa le nkqubo yesisombululo sesisombululo bangaba neenzuzo ezilandelayo.
Isixhobo soKhuseleko lweDatha yeWebhu yeNtsebenzo
I-Connotate inikeza isixhobo esibonakalayo esilula, apho abasebenzisi banokukhipha yonke idatha abayidingayo ngaphandle kokuchitha iiyure ezininzi. Enyanisweni, iingcali zeli qonga zinakekele yonke into, ngoko abaphandi bewebhu abadingeki bachithe ixesha elide baqokelela yonke into abayifunayo, kwaye akudingeki ukuba bachithe imali eninzi kubaprogram ukwenza umsebenzi kubo. Ngaphandle kokusebenzisa le nqonga, abasebenzisi baya kufuneka benze yonke imisebenzi ngesandla. Ukukhupha umxholo kunokuba ngumsebenzi onzima ezindleleni zendalo. I-Connotate isebenzisa inkqubo ehamba phambili kunye nedatha ye-intanethi ngokuzenzekelayo, ukwenzela ukuba banike abasebenzisi bayo iisombululo ezilungileyo ze-web scrap.
Ukuqokelela idatha kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo akuwona umsebenzi olula. I-Connotate isebenzisa iteknoloji enamandla kwaye iyazi kakuhle indlela yokuvula ubungako boqobo bewebhu. Injongo yalo kukuxhobisa abasebenzisi bayo ukuhlangabezana neemfuno zabo zolwazi. Ngexesha elifanayo, longeza inani kwiqulatho inkampani enikezela kubasebenzisi bayo. Ngokomzekelo, ubanikezela ukuhlalutya okukhulu, ukubonakala, ideshibhodi ezilula kunye nokunye. Abasebenzisi kufuneka bacele ukubonisana ngokunika imizekelo ethile yoluhlobo lwengcaciso yewebhu abanqwenela ukuyifumana.
Unika ama-Agent abanamava
Abasebenzisi kufuneka badale i-Agent ye-Connotate ngokukodwa nje. Ngaphezu koko, isofthiwe yokukhupha idatha ingadibanisa umxholo kunye nedatha ngokuzenzekelayo. Oku kwenza wonke umsebenzi ube lula, njengoko ugqibezela inani lamanyathelo, lawula amalungelo enkcubeko kwaye ujoyine idatha kwimithombo eminingi. Iingcali zengcali kwiConotate ziqonda imingeni. Basebenze nabaphuhlisi bee-app, ukuqala-ups, kunye nabanye ababoneleli bezoshishino ukuba banqobe.
Uzenzekelayo i-Web Data Data
I-software yokuqhafaza idatha ye-Connotate yenza i-chain yokunikezela kwedatha yakho yonke, kuquka ukukhutshwa, ukuguqulwa, ukugcinwa komgangatho kunye nokuhanjiswa kwezinto. Amandla ethu okuhlela amandla akuvumela ukuba uhlele amagosa kunye namaqela afana nama-afana afanayo, ekunikezeni ukulawulwa kakuhle kwi-extra data data and delivery. Izixhobo zethu zokukhutshwa kweedatha zivumeleke ukuba zikhishwe ngokusekelwe kwindlela ehlala zihlaziywa ngayo isayithi kwaye indlela ebalulekileyo ngayo idatha ngexesha lokulondoloza ukuhamba okucwangcisiweyo komxholo kwiinkqubo zakho ezantsi.
Ubuchwephesha obuphambili obusetyenziswa yiConotate lunceda bobabini abaphathi kunye nabaphandi bewebhu ukudala iiseti zeenkcukacha kunye nemveliso yokomxholo ngendlela ekhawulezayo nangempumelelo. Ngeli qonga, abathengi bafumana izibonelelo ezintle, idatha eninzi kunye neendleko ezinciphise Source .